होलीपछि सेयर बजारको यात्रा तल कि माथि ? विष्लेषक विमल तिवारीको यस्तो विश्लेषण ! - Arthasansar
होलीपछि सेयर बजारको यात्रा तल कि माथि ? विष्लेषक विमल तिवारीको यस्तो विश्लेषण !
आइतबार, १५ चैत्र २०७७, ०९ : ४३ मा प्रकाशित
यस साता सेयर बजारका सबै सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ । नेप्से परिसूचक, सेन्सेटिभ परिसूचक, कारोबार रकम र बजार पुँजीकरण सबै सूचकहरू बढेका छन् ।
यस साता नेप्से परिसूचक ७३ दशमलव ८७ अंकले बढेर २५ सय ४८ दशमलव ९६ विन्दुमा रोकिएको छ । गत साता नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ६१ अंकले बढेर २४ सय ७५ दशमलव ०९ विन्दुमा रोकिएको थियो । यस साता सेन्सेटिभ परिसूचक पनि ६।१६ अंकले बढेर ४५० दशमलव ३१ विन्दुमा पुगेको छ । ५ दिनको कारोबारमा यस साता बजार ३ दिन बढेको थियो भने सोमबार र बिहीबार बजारले ओरालो यात्रा तय गरेको थियो ।
कारोबार रकमको कुरा गर्नुपर्दा यस साता कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । गत साता औसतमा दैनिक ४ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा यस साता औसतमा दैनिक ५ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो ।
बजार पुँजीकरणको कुरा गर्नुपर्दा यस साता लगानीकर्ताको सम्पत्ती १ खर्ब ३ अर्बले बढेको छ । गत साता ३४ खर्ब १७ अर्ब रहेको बजार पुँजीकरण यस साता बढेर २५ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ ।
यस साता कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये अन्य उपसमूहको सूचक घट्दा बाँकी १२ वटा उपसमूहको सूचक भने बढेको छ । सोमबारदेखि खुल्ने सेयर बजार कता जाला ? हेरौं विश्लेषक विमल तिवारीको विश्लेषण ।
#Provident Merchant Banking Ltd